Madheshvani : The voice of Madhesh - एकीकरणको चर्चाले राजपा कमजोर हुँदैछ : जयनुल राइन
एकीकरणको चर्चाले राजपा कमजोर हुँदैछ : जयनुल राइन
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
२०७६ साल साउन १७ गते शुक्रबार ।
० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको कुरा चलिरहेको छ । राजपाले पहिला महाधिवेशन गर्ने कि एकता ?
— राजपा अहिले महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । साथै समाजवादी पार्टीसँग एकताको कुरा पनि चलिरहेको छ । तर एकताभन्दा पहिले महाधिवेशन गर्नुपर्ने समग्र नेता कार्यकर्ताहरूको आवाज छ । आगामी कार्तिक २८, २९ र ३० गते तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ । तर, जसरी अहिले एकीकरणको कुरा चलिरहेको छ, यसले राजपालाई हानी गरिरहेको छ । एकीकरणको नाममा समाजवादी मजबुत भइरहेको छ भने राजपा कमजोर हुँदैछ ।
० एकताको कुराले राजपा कसरी कमजोर हुँदैछ ?
— यदि वास्तवमै एकीकरणकै लागि कुरा चलिरहेको छ भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो । मधेशको एउटा मजबुत पार्टी होस् भन्ने चाहना हाम्रो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । तर, यति सजिलै एकीकरण हुन्छ भन्ने लाग्दैन । सबभन्दा पहिला राजपाको महाधिवेशन होस्, त्यसपछि कोसँग एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा टुंग्याउनु पर्छ ।
० एकीकरणको चर्चाले राजपाको महाधिवेशन ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ ?
— वास्तवमा एकीकरणको चर्चा चल्दा महाधिवेशनको जुन गतिले तयारी भइरहेको थियो त्यसमा ब्रेक लागेको छ । हामी गाउँ–गाउँमा जाँदा जनतामा एक किसिमको उत्साहजनक माहौल पाएका छौं । तर, महाधिवेशन नहुँदा पार्टी एकढिक्का नभएकोले फेरि कार्यकर्ताहरू गुटगुटमा विभाजित भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि राजपा एउटा पार्टीको रूप धारण गरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा समाजवादीसँग एकीकरणको कुरा चल्दा राजपा दिनप्रति दिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
० भनेपछि, तोकिएकै मितिमा राजपाले महाधिवेशन गर्न सक्छ त ?
— राजकिशोर यादवजी अध्यक्षमण्डलको संयोजक भइसकेपछि उहाँले बोलाउनुभएको बैठकमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने सबैको धारणा आएको थियो । संगठनलाई मजबुत बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सल्लाह र सुझाव आएको थियो । तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन होस् भन्ने सबैको एउटै आवाज छ । महाधिवेशनका लागि लागिप¥यो भने समयमै महाधिवेशन हुनसक्छ । नत्र तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन ।
० अहिले महाधिवेशनका लागि पार्टीपंक्ति पूर्णरूपमा लागेको छैन ?
— पार्टीले निर्देशन गरेअनुसार खटिएका पर्यवेक्षकहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, तिनीहरूले रिपोर्ट अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् ।
० महाधिवेशन तयारीमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ?
— एकीकरणको कुरा चल्ने बित्तिकै महाधिवेशनका लागि नेता कार्यकर्तामा जुन उत्साह देखिएको थियो त्यसमा कमी आएको छ । अब राजपा एकढिक्का हुन्छ, राजपा एउटा पार्टीको रूप धारण गर्छ भन्ने जुन विश्वास थियो त्यसमा निराशा देखिएकै हो । तीव्र गतिमा जसरी महाधिवेशनको तयारी भइरहेको थियो, त्यसमा यो एकीकरणको कुराले नेता कार्यकर्ताहरूको जोस जाँगर हराएको छ । त्यसले गर्दा राजपाको भविष्य के हुने भन्ने निश्चित छैन ।
० भनेपछि एकीकरणभन्दा पहिला महाधिवेशन हुनुपर्ने नेता कार्यकर्ताहरूको आवाज हो ?
— हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको चाहना महाधिवेशन नै हो । महाधिवेशनबाट जब पार्टी एकढिक्का भएर आउँछ र त्यसपछि एकीकरण गरौं भन्ने चाहना सबै नेता कार्यकर्ताहरूको छ ।
० प्रदेश २ को सरकारमा रहेका राजपाका मन्त्रीहरूको कार्यशैली सन्तोषजनक छैन भन्ने गुनासाहरू आउन थालेका छन् । तपाइँ प्रदेशसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाइँको अनुभव के छ ?
— निर्वाचनका बेलामा हाम्रो नारा नै थियो कि ‘अब कि बार मधेश सरकार’ । हामीले तत्कालीन फोरमसँग गठबन्धन बनाएर प्रदेश २ मा चुनाव लड्यौं र सन्तोषजनक परिणाम पनि ल्यायौं । त्यसको परिणामस्वरूप प्रदेश २ मा अहिले दुवै पार्टीको संयुक्त सरकार बनेको छ । प्रदेश २ मा बनेको मधेश सरकार मधेशी जनताको देन हो । मधेश सरकारबाट जनतामा जुन किसिमको अनुभूति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । तर, एकैचोटि सबै कुरा पूरा भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । राजपाका मन्त्रीहरूका बारेमा विभिन्न किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश २ का सरकारले गरेको कामबाट मधेशी जनता धेरै उत्साहित छन् र राजपाबाट धेरै खुशी छन् । विपक्षीहरूले हाम्रो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् र कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् । राजपाका मन्त्रीहरूले गरेको काम एकदम सन्तोषजनक छ । केही कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ । अहिले नयाँ–नयाँ संरचना छ, केही कुराहरू नजानेर वा अनुभव नभएर केही त्रुटि भएको होला । तर, त्यसलाई सच्याउँदै जानेछ ।
० तर, राजपाका मन्त्रीहरूको कार्यशैली सन्तोषजनक छैन भनेर मन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा अध्यक्षमण्डलमा चर्चा भइरहेको कुराहरू छ नि ?
— त्यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ । काम सन्तोषजनक भएन भने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले मन्त्री परिवर्तनको माग गर्नु स्वाभाविक हो । तर, मन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा राजपाको अध्यक्षमण्डल छैन । राजपाका मन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा कहाँबाट र किन आयो त्यो हामीलाई थाहा छैन । यदि आवश्यक प¥यो प्रदेशमा राजपाले आफ्ना मन्त्री परिवर्तन पनि गर्न सक्छ । तर, अहिले नै त्यस्तो अवस्था आइसकेको छैन ।
० प्रदेश २ मा आएको विनाशकारी बाढी र डुबानमा प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक छ ?
— बाढी आउने बित्तिकै प्रदेश सरकारले राहतका लागि आठवटै जिल्लामा १०–१० लाख रूपैयाँ पठाएको छ । बाढी र डुबानमा ज्यान गुमाउने परिवारका लागि ३–३ लाख रूपैयाँ पठाइसकेको अवस्था छ । आठवटै जिल्लाका सिडियोको जिम्मा गइसकेको छ । तर, वास्तविक कतिपय पीडितहरूले राहत पाउन नसकेको गुनासाहरू त छन् । कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म राहत पुगेको छैन । मेरै जिल्ला महोत्तरीमा बाढीपीडितहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । अहिलेसम्म राहत पुगेको छैन । प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारले पनि अहिलेसम्म ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । यस्तो विपद्को घडीमा संघीय सरकारले जुन किसिमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राहत र उद्धारका लागि आह्वान गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । किनभने प्रदेश २ लाई संघीय सरकारले जहिले पनि हेपेकै हो र अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ । त्यसैले गर्दा अहिले राहत पूर्ति गर्न सकिएको छैन ।
० असमावेशी लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरूद्ध जसरी विभिन्न संघसंस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यसमा राजपा किन चुकिरहेको छ ?
— राजपाले लोकसेवा आयोगको असमावेशी र असंवैधानिक विज्ञापनलाई विज्ञप्तिमार्फत् विरोध गरिसकेको छ । ठाउँ–ठाउँमा हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू पनि विज्ञापनको विरूद्धमा आन्दोलनमा लागेकै हो । समानुपातिक समावेशिताका लागि राजपा आन्दोलन गर्न तयार पनि छ ।
० तर, असमावेशी विज्ञापनविरूद्ध राजपाले औपचारिकता मात्र पूरा गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?
— राजपाका भ्रातृ संगठनहरूले यो विज्ञापनको विरोध गरेकै छन् । उपेक्षित समुदायले पनि यो विज्ञापनको विरूद्धमा आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ । राजपाका भ्रातृ संगठन आन्दोलित हुनु र त्यसको विरूद्धमा विज्ञप्ति आउनु औपचारिक मात्र पूरा गरेको भन्नु मिल्दैन ।
० अहिले संघीय संसदमा जसरी कांग्रेस र राजपाबीच सहकार्य जस्तो देखिएको छ, आगामी दिनमा गठबन्धनको संकेत हो ?
— कांग्रेससँग केही मुद्दामा एकमत देखिएको छ । कुनै कुनै मुद्दामा राजपा र कांग्रेसले संघीय संसदमा सँगै आवाज उठाएको छ । तर, दीर्घकालीन गठबन्धनको सम्भावना देखिएको छैन । यदि भोली गठबन्धन वा एकताको कुरा आयो भने समाजवादी पार्टीसँग हुन सक्छ ।